Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem nlegharị anya Jamaica na-enwe mkparịta ụka itinye ego n'ụgbọ mmiri dị mkpa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Minista njem nleta, Hon. Edmund Bartlett (n'aka ekpe) na -ewetara otu akwụkwọ akụkọ Jamaica nke dabeere na Global Tourism Resilience na Crisis Management Centre nke onye isi oche nke DP World, Mohammed Al Maullem. Emere ngosi a n'oge na-adịbeghị anya na njedebe nke nzukọ itinye ego ụgbọ mmiri dị elu na DP World, nnukwu ụlọ ọrụ lọjistik ọtụtụ mba dabere na United Arab Emirates.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na nso nso a mechiri usoro nzukọ ụgbọ mmiri dị mkpa na DP World, nnukwu ụlọ ọrụ lọjistik ọtụtụ mba dabere na United Arab Emirates (UAE).
N'ime nzukọ ụbọchị atọ sochiri anya, enweela mkparịta ụka siri ike gbasara itinye ego na Port Royal Cruise Port na ohere nke mbupụ ụlọ.
Ọzọkwa na tebụl maka mkparịta ụka bụ mmepe ụlọ ọrụ lọjistik, ụgbọ njem Vernamfield multi-modal na aerotropolis, yana itinye ego ndị ọzọ.
Mkparịta ụka ndị a ga -aga n'ihu n'ọdịnihu dị nso.
“Obi dị m ezigbo ụtọ ikwuwapụta na nzukọ anyị na otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa, DP World enweela ihe ịga nke ọma. N'ime ụbọchị atọ sochiri nzukọ, anyị enweela mkparịta ụka siri ike gbasara itinye ego na Port Royal Cruise Port na ohere nke mbupụ ụlọ. Anyị tụlere maka mmepe nke ngwa lọjistik, ụgbọ njem Vernamfield multi-modal na aerotropolis, yana itinye ego maka ihe owuwu ihe ndị ọzọ, "Bartlett kwuru.
Onye isi oche DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, site n'aka onye nnọchi anya ya, onye isi oche onye isi oche nke DP World, Mohammed Al Maullem, gosipụtara mmasị. na Jamaica wee kelee Prime Minister, Kachasị Hon. Andrew Holness dee.
Bartlett na ndị isi nke DP World ga -aga n'ihu na Port Authority nke Jamaica na Ministry of Economic Growth na Job Creation ka mkparịta ụka a na nso nso a.
DP World bụ ọkachamara na ngwa agha, ọrụ ụgbọ mmiri, arụmọrụ ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara azụmaahịa efu. E hiwere ya na 2005 mgbe njikọta nke Dubai Ports Authority na Dubai Ports International. DP World na -ejikwa ihe ruru nde iri asaa nke ihe dị ka ụgbọ mmiri 70 na -ebute kwa afọ, nke pụtara ihe dị ka 70,000% nke okporo ụzọ ụgbọ mmiri nke ọdụ ụgbọ mmiri 10 na ọdụ ụgbọ mmiri dị na mba 82 dị ugbu a. Ruo afọ 40, DP World bụ onye na -ahụ maka ọdụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ, na kemgbe ahụ ọ nwetala ụlọ ọrụ ndị ọzọ elu na agbada ọnụ ahịa.
Mgbe ị nọ na UAE, Minista Bartlett na ndị otu ya ga -ezutekwa ndị nnọchi anya ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke mba ahụ ka ha kpaa maka imekọ ihe ọnụ na itinye ego na njem nlegharị anya na mpaghara; Atumatu njem njem Middle East; na ịnweta ọnụ ụzọ maka North Africa na Eshia na mmezi nke ikuku elu. A ga -enwe nzukọ na ndị isi nke DNATA Tours, otu onye na -ahụ maka njem nlegharị anya na UAE; ndị otu Jamaican Diaspora na UAE; na isi ụgbọ elu atọ dị na Middle East - Emirates, Ethiad na Qatar.
Site na UAE, Minista Bartlett ga -aga Riyadh, Saudi Arabia, ebe ọ ga -ekwu okwu na ncheta afọ ise nke ọdịnihu itinye ego n'ọdịnihu (FII). FII nke afọ a ga-agụnye mkparịta ụka miri emi banyere ohere itinye ego zuru ụwa ọnụ, nyocha nke usoro ụlọ ọrụ, na ịkparịta ụka n'adịghị n'etiti ndị isi, ndị isi ụwa na ndị ọkachamara. Onye ga -eso ya bụ Senator, Hon. Aubyn Hill n'ọkwa ya dị ka Minista na -enweghị Pọtụfoliyo na Ministry of Economic Growth and Job Creation (MEGJC), nwere ọrụ maka Mmiri, Ala, Mpụpụta Usoro Azụmaahịa (BPOs), ikike mpaghara mpaghara pụrụ iche nke Jamaica na ọrụ pụrụ iche.
Minista Bartlett ga -alaghachi n'agwaetiti ahụ na Satọde, Nọvemba 6, 2021.